Imiyalo eyi-10 yokuThuthukiswa kweWebhu yanamuhla | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 15, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ukuxhumana kuyisihluthulelo njengeMenenja yoMkhiqizo nenkampani yesoftware. Muva nje, ngisebenze futhi ngashicilela "imiyalo" elandelayo yokuthuthuka kwewebhu yanamuhla okufanele isatshalaliswe emaqenjini ethu. Wonke umakhi wewebhu wanamuhla (noma uhlelo lokusebenza) kufanele alandele le miyalo eyishumi.
Kukhona okuhle amagama wokuhlela lokho kungakhishelwa ngaphandle kwakho konke lokhu; kodwa-ke, inhloso yami bekuwukubeka la magama afanayo abaqeqeshiwe be-software (kanye nawe) ongawaqonda.
Hlala uxhasa ama-99% wabasebenzisi be-inthanethi, ngaphandle kwesiphequluli, inguqulo yesiphequluli, noma uhlelo lokusebenza Lungisa ngokufanele futhi uhlale uzilungiselele ngokukhishwa kwe-beta.
Sebenzisa njalo ikhodi ehambisanayo ye-XHTML yohlelo lokusebenza, ireferensi ye-DTD kanye nesiphequluli esivumelana nesitayela se-Cascading Style Sheets kuzo zonke izitayela zesakhiwo nezithombe zohlelo lokusebenza.
Njalo ireferensi yombhalo nezintambo ngezinto zesethenjwa ezisekela noma isiphi uhlamvu futhi ezingadingi ukwakhiwa.
Njalo izinsuku nezikhathi zokubhekisela ku-GMT ezivumela noma imuphi umsebenzisi ukuthi aguqule okukhishwayo ngendlela afisa ngayo.
Njalo yakha into yokuhlanganisa kuzo zonke izici.
Njalo yakhela kumazinga we-RFC (ama-imeyili wombhalo, ama-imeyili e-HTML, amakheli e-imeyili, izinkomba zesizinda, njll.)
Njalo yakha ngoku modular. Uma kunezinketho ezingaphezu kweyodwa noma yikuphi kuhlelo lokusebenza, kufanele ukwazi ukwengeza okuningi ngaphandle kokudinga ukwakhiwa.
Uma izingxenye ezingaphezu kwesisodwa zohlelo lokusebenza zikwenza, zonke izingxenye zohlelo lokusebenza kumele zikhombe iphuzu elilodwa.
Ungalokothi uphinde wenze lokho ongakuthenga futhi njalo ulungise uhlelo lwethu lokusebenza ukusekela okuthengile.
Uma abasebenzisi bekwazi ukukwenza, khona-ke siyakusekela. Uma kungafanele bakwenze, kufanele sikuqinisekise.
Feb 17, 2007 ngo-5: 54 AM
Ngiyavuma. Kodwa-ke kususelwa kuphoyinti 7. ngikholelwa ukuthi nasekuthuthukisweni kwewebhu, idatha, ukumelwa (ama-GUI'S) kanye nomqondo webhizinisi kufanele kuhlukaniswe ngaso sonke isikhathi ngokususelwa kunqubo esekwe kwimodeli ye-MVC.
Lokhu kuzokhuphuka, ikhwalithi yesoftware, kanye nokwanda.
Feb 17, 2007 ngo-1: 50 PM
Ngiyabonga, Andreas! Lowo-ke ungumoya ka- # 7 - izikhangiso zakho zokuphawula zicaciseleka kakhulu.